विश्वकै सर्वाधिक धेरै कमाइ गर्ने क्रिकेट खेलाडीहरुमा भारतीय खेलाडीहरुको बर्चस्व
विश्वभर क्रिकेटको क्रेज बढी नै रहेको छ । अब क्रिकेटलाई पनि सबैभन्दा धेरै दर्शकले मनपराउने तथा हेर्ने खेलको रुपमा विकास भइसकेको छ ।
दक्षिण एसियामा क्रिकेटको राम्रो विकास भएको मानिन्छ । आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिए पनि यी राष्ट्रहरुमा क्रिकेटको क्रेज सबैभन्दा बढी रहेको छ । अष्ट्रेलिया र इङ्ल्याल्याण्ड पश्चात क्रिकेटको उल्लेख्य विकास भएको देशहरु भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका हुन् ।
क्रिकेटबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण क्रिकेट खेलाडीहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । उनीहरुको वार्षिक आम्दानीले पनि यही कुराको प्रमाणित गरेको छ । क्रिकेटमा पाएको सफलताका कारण उनीहरुले विभिन्न ब्राण्डको प्रमोट गर्ने तथा ब्राण्ड एम्बेसडर भएर मनग्य आम्दानी गरेका छन् । आउनुहोस् हेरौ विश्वका १० धनी क्रिकेटर
१०. विराट कोहली
कुल आम्दानीः १५ मिलियन अमेरिकी डलर
भारतीय राष्ट्रिय टोलीका मिडल अर्डर ब्याट्सम्यान हुन् विराट कोहली । उनको धमाकेदार ब्याटिङकै कारण विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने १० खेलाडीको सुचीमा उनले आफुलाई राख्न सफल भएका छन् । उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा आक्रामक खेलाडीको रुपमा चिनिने गरिन्छ । उनको कुल आम्दानी १५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनी तब चम्किए जब उनले कर्नाटक विरुद्ध ९० रन बनाए । तल रहेको दिल्ली टोलीलाई माथि ल्याउन उनले प्रमुख भुमिका खेलेका थिए । प्रत्येक वर्ष ७.१ मिलियन डलर बैंकमा जम्मा गर्ने खेलाडी भएपछि उनी धनी खेलाडीको सुचीमा आएका हुन् ।
उनको धेरै जसो आम्दानी खेल तथा इण्डोर्समेन्टबाट हुनेगर्छ । उनको नाइक, टोएटा र पेप्सीसँग कन्ट्रयाक रहेको छ ।
९. एन्ड्रिउ फ्रिलीनटोफ
कुल आम्दानीः १५.६ अमेरिकी डलर
एन्ड्रीउले क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका छन् । खेलबाट सन्यास लिए पनि उनी त्रिकेटमा सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको ९ स्थानमा रहेका छन् । उनको खेल जीवनमा उनी विश्वकै सर्वोकृष्ट अलराउण्डर खेलाडीको रुपमा परिचीत थिए ।
इङ्ल्याण्ड, चेन्नइ सुपर किङ्स (भारतीय प्रिमियर लिग टिम), लान्कासेयरबाट खेल्दा उनले १५ मिलियन डलर कुल आम्दानी गरेका थिए । घुडामा चोट आएपछि उनले क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।
उनको धेरै जसो आम्दानी पुमा, बाक्र्लेज क्यापिटल, रेडबुल, सेल र अन्य ब्राण्डबाट हुने गर्छ । उनी हाल प्रोफेसनल बक्सर हुन् भने ब्रोडकास्टर पनि हुन् ।
८. माइकल क्लार्क
कुल आम्दानीः १६ मिलियन अमेरिकी डलर
विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउनेको सुचीमा क्रिकेटर माइकल क्लार्क ८ औ स्थानमा रहेका छन् । उनको कुल आम्दानी १६ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनी अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने खेलाडीको रुपमा परिचीत छन् । उनले वार्षिक ४.९ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छन् । उनले जिलेट, बन्ड्स र स्पार्टन स्पोर्टसको इण्डोर्स गर्ने काम गर्छन् ।
माइकल क्लार्क मिडल अर्डर व्याट्सम्यान हुन् । उनलाई ‘क्लार्के’, ‘पप’, ‘निमो’ भनेर समेत बोलाउने गरिन्छ ।
७. राहुल ड्रबिड
कुल आम्दानीः ३१ मिलियन अमेरिकी डलर
सन् २०११ मा सन्यास लिएका राहुल सबैभन्दा धेरै कमाउने क्रिकेटरको सुचीमा ७ औ स्थानमा रहेका छन् । उनी भारतीय राष्ट्रिय टोलीको सर्वोत्कष्ट खेलाडीको रुपमा परिचीत छन् । भारतीय क्रिकेटको इतिहासमा राहुलले भारतीय टोलीलाई ठुलो योगदान दिएका छन् । करिब दुई दशक क्रिकेटमा बिताएका राहुलको कुल आम्दानी ३१ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
उनको धेरै जसो आम्दानीहरु खेल तथा विभिन्न इण्डोर्समेन्टबाट आउने गर्छ । प्रख्यात ब्राण्डहरु पेप्सी, जिलेट, रिबुक जस्ता ब्राण्डहरुसँग उनी आवद्ध रहेका छन् ।
सन् २०१५ मा पनि उनी सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीको सुचीको ७ औ स्थानमा रहेका थिए ।
६. युवराज सिंह
कुल आम्दानीः ३५.५ मिलियन अमेरिकी डलर
युवराज सिंह एक फिल्म स्टार तथा बलर परिवारमा जन्मिएका थिए । उनको कुल आम्दानी ३५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भारतीय राष्ट्रिय टोलीमा बिस्फोटक ब्याट्सम्यानको रुपमा परिचीत युवराजले सन् २००७ मा भएको टि२० कप र सन् २०११ को वल्र्ड्स आइसीसी कप जितेका थिए ।
सन् २०११ को क्रिकेट विश्वकपमा उनी म्यान अफ द टोर्नामेन्ट घोषित भएका थिए । युवराज विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीको सुचीको छैटौ स्थानमा रहेका छन् ।
५. सेन वार्ने
कुल आम्दानीः ५० मिलियन अमेरिकी डलर
क्रिकेटमा केही यस्ता खेलाडीहरुमात्र छन् जसको आम्दानी ५० मिलियन डलरभन्दा माथि रहेको छ । तीमध्येका एक खेलाडी हुन्, सेन वार्ने । अष्ट्रेलियाको चर्चीत क्रिकेट खेलाडीहरुको सुचीमा पनि उनी अगाडी नै रहेका छन् ।
क्रिकेटको इतिहासमा सेनलाई उत्कृष्ट स्पीनरको रुपमा लिने गरिन्छ । उनको धेरै जसो कमाई पोकर खेलबाट हुने गर्छ । उनी कमेनटेटर पनि हुन् ।
४. सौरभ गांगुली
कुल आम्दानीः ५५.५ अमेरिकी डलर
सौरभलाई कलकत्ताको राजकुमार भनेर चिनिन्छ । उनी विश्वकै सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सुचीको चौथो स्थानमा रहेका छन् । उनको पुख्यौली सम्पत्ति पनि उत्तिकै रहेको छ । उनका पिता एक सफल व्यापारी हुन् । उनले प्रिन्ट बिजनेशमा राम्रो कमाइ गरेका थिए ।
सौरभको कुल आम्दानी ५५.५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनी राष्ट्रिय टोलीको अहम भुमिकामा पनि देखिएका थिए । उनले पेप्सी र पुमाको इडोर्स गर्ने काम गर्छन् । अब भने उनी कमेनटेटर भएर काम गर्ने गर्छन् ।
३. रिक्की पोन्टिङ
विश्वकै सर्वाधिक कमाउने १० खेलाडीको सुचीमा पर्छन् रिक्की पोन्टिङ । उनको कुल आम्दानी ६५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनले धेरै जसो कमाइ व्यवसायीक क्रिकेट खेल्दा कमाएका हुन् । अष्ट्रेलियन क्रिकेट टोलीमा रहँदा उनको भुमिकालाई लिएर ठुलो चर्चा हुने गथ्र्यो ।
कप्तानीको हैसियत सबैभन्दा धेरै कितिमार्नी पनि रिक्की पोन्टिङको नाममा रहेको छ । उनको कप्तानीमा अष्ट्रेलियाले धेरै खेलहरु जितेको किर्तिमानी पनि रहेको छ । उनलाई क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कप्तानको रुपमा लिने गरिन्छ ।
२. सचिन देन्दुकर
कुल आम्दानीः १२० मिलियन अमेरिकी डलर
क्रिक्रेटको इतिहासमा सबैभन्दा सर्वोत्कृट ब्याट्सम्यानको रुपमा लिने गरिन्छ सचिन तेन्दुकरलाई । उनी विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउने क्रिकेट खेलाडीको सुचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । उनले वार्षिक १८.६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छन् । उनले राष्ट्रिय टोलीबाट दुई दशकभन्दा बढी क्रिकेट खेलेका थिए । उनी विभिन्न ब्राण्डहरु एडिडास, रोयल बैंक अफ स्कटल्याण्ड तथा एडिडासको इडोर्स गर्ने गर्छन् ।
कुल आम्दानीः १५० मिलियन अमेरिकी डलर
भारतीय क्रिकेट इतिहासमा महेन्द्र सिंह धोनीलाई डायमण्डको रुपमा चिनिने गरिन्छ । उनको कुल आम्दानी १५० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनले वार्षिक २६.५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छन् । उनको आम्दानी क्रिकेट खेलसँगै बिभिन्न ब्राण्डको इडोर्समेन्टबाट हुने गर्छ । उनले पेप्सी, रिबुक र युनाइटेड ब्रिउरी गु्रपको इणोर्स गर्ने काम गर्छन् ।
धोनी विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीको पहिलो सुचीमा रहेका छन् । उनी भारतीय टोलीको उत्कृष्ट कप्तानको रुपमा परिचीत छन् ।